Tambajotran’i Kaokazy: Bilaogera Vondro-Tafika Manokana, Hard Ingush · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2013 0:03 GMT
Saripikan'ny sarintavan'ny mpisera LJ Hard Ingush ao amin'ny LiveJournal. Pikantsary.
Ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny fanadihadian'ny RuNet Echo momba ny tontolom-bilaogin'i Kaokazy avaratra. Savasavao ny tatitra feno sy ny tantara manokana ao amin'ny pejy Tambajotran'i Kaokazy.
Monina ao Ingushetia i Hard Ingush (izay maniry ny mbola tsy hamantarana ny tena anarany) izay milaza tena ho manamboninahitra mpampihatra ny lalàna ao amin'ny Vondro-Tafika Manokana. Tao anatin'ny roa taona izay dia izy no lohalaharana ao amin'ny tontolom-bilaogin'i Kaokazy avaratra.
Mahazo mpitsidika im-polo avy heny noho izay rehetra ao amin'ny zoro “tampon'ny bilaogim-paritra” ao amin'ny tranonkala efa nodimandry PublicPost ny bilaoginy ao amin'ny LiveJournal. Ny tahirin-kevitr'ilay mpisera LJ Kaokaziana Timur Agirov ihany koa dia mandahatra azy ao amin'ny bilaogeran'ny fiaraha-monina malaza indrindra.
Amin'ny ankapobeny ny soratan'i Hard Ingush dia mampisongadina ho amin'ny antsipirihany ireo tsikaritra amin'ny bemidina faraparany nataon'ny polisy manokana, izay mpisahana ny ady amin'ny fampihorohoroana. Mampiasa fiteny mivantana sy matetika mampiady izany izy, manoratra amin'ny fangaron-teny ara-dalàna sy ny tenin-jatovon'ny polisy rosiana.
Miresaka matetika ireo hetsi-piokoana amin'ny fiteny manabanty izy, manoritsoritra ny mpikambana ao amin'izy ireny ho vondron'olona kamo izay ry zareo ihany no tokony hotezerana amin'ny tsy fahombiazan'ny fanentanan'izy ireo. Ao ami'ny famahanam-bilaoginy i Hard Ingush no mandray izay mety antsointsika hoe fizarana ny “fomba fiasa fampahafantarana” amin'ny lazaina ho ohatra fakantahaka amin'ny asan'ny polisy.
Nanaiky hifampitafatafa amin'ny alalan'ny mailaka i Hard Ingush, ary namaly fanontaniana miaraka amin'ny antsipirihany kely araka izay azony natao (mifangarika amin'ny bilaogera hafa efa nitafatafana tamin'ity tetikasa ity, izay nandany fotoana maro hamaliana). Zara raha mamaly hoe “eny” na “tsia” fotsiny i Hard Ingush raha azony atao izany.
Raha nilaza izy fa tsy niantraika tamin'ny fiainany ivelan'ny aterineto ny famahanam-bilaogy ataony, dia tsy maintsy nanaiky izy fa mampiditra azy ao amin'ireo mpiasa mpampihatra lalàna hafa ilay fahazotoany ato amin'ny serasera.
Manambara i Hard Ingush fa tsy mbola nifanehatra tamin'ny karazana fanampenam-bava mihitsy izy ary tsy maniva-tena amin'izay soratany, afa-tsy amin'ny fanafenana ny mombamomba ireo olona soritsoritany. (Tafiditra ao na ny mpiara-miasa na ireo ahiahiana ho nahavita heloka, na dia milaza ny tena anaran'ireo polisy maty am-perinasa aza izy indraindray.) Mahangona mpanaraka saiky eo noho eo i Hard Ingush, ary mbola mitohy mahazo fanehoan-kevitra anelanelan'ny 200-3000 isaky ny manoratra bilaogy. Ahitana mpanohana sy mpitsikera ao amin'ny mpamaky azy, ka mahatonga ny tahalan'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaoginy ho sehatry ny adi-hevitra.
Amin'ny teny rosiana ihany no anoratan'i Hard Ingush. Hita ao amin'ny fifehezany ny fiteny ny fananany haavom-pianarana ambony. Tsindraindray izy no mametraka ny rohin'ny votoatin'ny bilaogera hafa noho ny sary na lahatsary izay tsy novokariny.
Hard Ingush ihany koa ny iray amin'ireo bilaogera mpiteny sy mahaliana indrindra ao amin'ny faritra. Raha isaky ny lahatsoratra dia mahazo fanehoan-kevitra impolo avoheny mihoatra noho ilay mifaninana aminy monina ao Moskoa antsoina hoe Omon Moscow (bilaogera hafa tsy miseho anarana,heverina ho miezaka ny miseho ho polisy, na dia hafa mihitsy aza ny fomba fisehony sy ny lantom-peo ampiasainy) izy. Tsy mazava aloha raha mifandray ny roa tonta na tsia.
Ao amin'ny fanehoan-kevitry ny bilaoginy i Hard Ingush dia voatsikeera hatrany ho ao anatin'ny tetikasan'ny governemanta misahana ny fifandraisana amin'ny vahoaka—zavatra izay tevatevain'i Hard Ingush mivantana eo amin'ny sava-lalan'ny bilaoginy LiveJournal.
(Petra-kevitry ny tsikombakomba izany mazava loatra, raha tsy dia marina loatra, satria tsy ankavitsiana ny fifampiahiahiana ao amin'ny RuNet — ary noho ny antony mazava izany. Amin'ireo Sampan-draharahan'i Rosia maro amin'ny fifandraisana amin'ny vahoaka, ny maro amin'izy ireo dia tetikasa lavitr'ezaka mikendry ny hanefy ny hevi-bahoaka hirona any amin'ny fanjakana. Ohatra, iray amin'ireny sampan-draharaha ireny ny “Agency1 Ru,” izay tompon'andraikitra tamin'ny fananganana ny vondrona manohana an'i Putin.)
Na mahaleo tena na tantanin'ny fanjakana ny famahanam-bilaogin'i Hard Ingush (“astroturf” na “grassroots”), dia tsy azo lavina fa mampiady hevitra sy malaza izy amin'ny aterineto, any Kaokazy Avaratra raha amin'ny faritra, ary ao Rosia raha manerana ny Firenena.
Kazakhstan 4 ora izay